စျေးရောင်းနေတာ ONLINE မှာ ဘယ်အချိန်ထိစျေး ရောင်းနေတုန်းမှာ လည်း လို့မေးလာတာကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောလိုက်တဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်…. – Shwe Naung
N N | June 16, 2021 | Celebrity | No Comments
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…ဇာတ်ပို့ သရုပ်တောင် နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်ဟာဆိုရင် အနုပညာ လောကမှာပရိတ်သတ် ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင် တစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။
သူမဟာဆိုရင် ရုပ်ရှင် နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားပေါင်း များစွာကို ကျရာ ဇာတ်ရုပ်မှာ ပီပြင်ပိုင်နိုင်စွာ သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အတွက် ပရိတ်သတ်အချုင်အမာရရှိ ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
နှိုင်းယှဉ်က လူချစ်လူခင် ပေါရုံတင် မကပဲ အလှူအတန်းမှာ ဆိုရင်လည်း လက်မနှေးပဲ လှူဒါန်းတတ်တဲ့သူမရဲ့ စိတ်ဓာတ်လေးကို အားလုံးက ချစ်ခင်လေးစားနေကြ တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်..။
စကားပြော ပွင့်လင်းလှတဲ့နှိုင်းယှဉ်က သူမလုပ်ကိုင် နေတဲ့ Online ကနေ Live လွှင့်ပြီး စျေးရောင်းပေးတဲ့ နေရာမှလည်းအင်မတန်မှတော်လွန်းတဲ့သူ တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။
နှိုင်းယှဉ်က သူမလုပ်ကိုင် တဲ့အလုပ်အပေါ် မှာလည်း စေတနာအပြည့်ထားပြီးလုပ်ကိုင်ပေးတဲ့အတွက် လုပ်ငန်းရှင် တော်တော်များများရဲ့ယုံကြည်အားကိုးမှုကို အပြည့်အဝရ ထားတဲ့သူ တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နှိုင်းယှဉ်က လတ်တလောဖြစ် ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက် ပြီးတော့လည်း
ပြည်သူလူထုနဲ့ အတူလူထုလှုပ်ရှားမှု မှာပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ ရုံတင်မကပဲ သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာကနေလည်း Speak Out လုပ်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။နှိုင်းယှဉ်က သူမရဲ့ခံစားချက်တွေကို သူမရဲ့လူမှု ကွန်ယက်စာမျက်နှာကနေ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းအမြဲ မျှဝေပေးနေတာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာဆိုရင်လည်း သူမကို ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့ဘယ်အချိန်ထိLiveလွှင့်ပြီးစျေးရောင်းနေမှာ လည်းလို့မေးလာတဲ့သူကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းအခုလိုပြောလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်..။အဲံဒါကတေ့ “မေးးး အမ ကိုယ်ဝန်နဲ့ဆို ဘယ်အချိန်ထိ Live လွှင့်ဈေးရောင်းမှာလည်းဖြေးးးး ဟုတ်ကဲ့ ခွဲခန်းထဲမဝင်ခင်ထိပါ ဆေးရုံတောင် အခန်းကို ရှယ်ပလန်နဲ့ အကျယ်ကြီးယူထားတာ…
Liveလွှင့်ပြီး ဈေးရောင်း‌ပေးဖို့ ”ဆိုပြီးပြန်ပြောလိုက် ပုံလေးကို သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာမှာ ရေးသားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။နှိုင်းယှဉ်ကိုချစ်တဲ့ပရိတ်သတ် တွေကလည်း သူမရဲ့အလုပ်အပေါ် ထားတဲ့ စိတ်ရင်းအမှန်နဲ့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတတ် တဲ့ပုံလေးကိုချစ်မဝဖြစ်နေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိတ်သတ် တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကို အထူး ပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်..။
အကာ အကွယ် ပစ္စည်းတွေ အကုန်လာ ယူကြပါ ဆိုပြီး ရက်ရက် ရော ရော လှူနေတဲ့ အိမ့်ချစ်….
မော်ဒယ်လ် အယ်လာရဲ့ အမိုက်စား ကောက်ကြောင်း ပုံရိပ်လေးများ……